Xarunta Jawaabta |
Inta badan shanta xarumood ee mashiinka wax lagu farsameeyo ayaa qaata qaab dhismeedka 3 + 2, taas oo ah, XYZ seddex faasas oo toosan oo lagu daray labo ABC ah oo seddex faasas ah oo wareegaya wareega XYZ siday u kala horreeyaan. Marka laga eego dhinaca ballaaran, waxaa jira kyzab, xyzac iyo xyzbc. Marka loo eego qaabka isku dhafan ee labada faasas ee wareegaya, waxay noqon kartaa div ...
Sideen si sax ah u dooran karnaa soo saarayaasha lathe CNC tayo sare leh
Ilaha ugu muhiimsan ee alaab-qeybiyeyaasha warshadaha farsamada farsamadu waxay ku urursan yihiin Pearl River Delta iyo gobolka Yangtze River Delta, halkaas oo tirada soosaarayaasha wax soo saarka CNC lathe ay sidoo kale yihiin koox aad u tiro badan. Marka sida saxda ah ee loo xusho CNC lathe processing manufactu ...
Waa maxay mustaqbalka takhasuska mashiinnada NC iyo sida loo doorto?
Shiinaha, takhasuska makiinada CNC wuxuu noqday mid caalami ah tobankii sano ee la soo dhaafay, iyo soosaarayaasha qalabka mashiinka CNC sidoo kale waxay ubaxeen meel kasta. Xadka shirkadaha ganacsiga ee NC ayaa hoos u sii dhacaya, hoos udhaca, iyo adeegsiga tikniyoolajiyadda ee ku takhasusida mashiinada NC aad iyo aad ayaa loo adeegsadaa. ...
Xakamaynta saxnaanta mashiinka lathe CNC ee wax soo saarka
Xakamaynta saxnaanta mashiinka CNC lathe ee wax soo saarka Saamaynta saxnaanta mashiinka lathe ee CNC guud ahaan waxaa sababa dhowr arrimood oo soo socda, mid waa sababta qalabka, tan labaadna waa dhibaatada qalabka, tan saddexaadna waa barnaamij, kan afraadna waa qaladka bartilmaameedka, maanta Wally machin ...
Sida loo horumariyo waxtarkayaga wax soo saar iyadoo loo marayo barnaamijka xarunta makiinada CNC
Qalabka saxda ah ee CNC, sida loo hagaajiyo waxsoosaarka wax soo saarka iyada oo loo marayo barnaamijka xarunta dhexe ee mashiinka CNC waa koorso loo baahan yahay oo loogu talagalay xirfadleyda makiinada. Waxyaabaha saamaynaya waxtarka mashiinka CNC waxaa ka mid ah dhibaatooyinka qalabka, dhibaatooyinka isku dheelitirka, qalabka mashiinka, iwm, iyo qodobadan ...
Warshadaha wax lagu farsameeyo CNC wixii ka dambeeya 2019, shirkadaha inbadan iyo ka badanba waxay dareemayaan inay yaraanayaan amarada suuqa. Sida loo maareeyo warshadaha wax soo saarka CNC waxay noqotay mowduuc ay ka walaacsan yihiin ganacsato badan. Tiknoolajiyada Mashiinka Wally waxay ka shaqeyneysay warshadaha wax soo saarka CNC sanado badan, waana als ...
Sida looga fogaado shilalka shilalka ee wax soo saarka maalinlaha ah ee mashiinka CNC ee lathe
In geeddi-socodka hawl maalmeedka farsamaynta, ka shaqaynta xarunta makiinadda CNC waa habka ugu caamsan, iyo sidoo kale habka ugu tiirsan ee mashiinka saxda ah. Markii aan ku raaxeysanno qalabka tiknoolajiyadda sare si aan u xallino dhibaatooyinka ka baaraandegidda, sida looga hortago in xarunta makiinadda CNC ay garaacdo m ...
Sida loo xusho cabbirada saxda ah ee quudinta loogu talagalay lathe CNC qaybo ka shaqeynaya si loo hubiyo saxnaanta sheyga
In geeddi-socodka ee farsamaynta qaybo farsamo, lathe CNC waa qalabka wax soo saarka CNC ugu caansan. Sidee si wax ku ool ah loogu xaqiijiyaa saxsanaanta wax soo saarka sheyga? Dejinta xuduudaha quudinta goynta CNC lathe waa habka saxda ah ee lagu hubinayo saxnaanta cabirka alaabada. Kadib Wally mashiin ...
Sida loo qiimeeyo saxnaanta sheegashada xarunta makiinada CNC marka la iibsanayo qaybo sax ah
Markay shirkaduhu iibsadaan qaybo sax ah, oraahda xarunta makiinada CNC ee ay bixiso alaab-qeybiyeyaashu si sax ah looma qiimeyn karo, taasoo horseedaysa xulashada alaab-qeybiyeyaasha, taasoo ka dhalanaysa tayada wax soo saarka oo ku dhaca iyo dib u dhaca keenista. Sideen si sax ah ugu qiimeynaa oraahda mashiinka CNC ...
Saxnimada xarunta mashiinka ayaa guud ahaan laga qiimeeyaa dhinacyada ay ka kooban tahay
Ku hawlan warshadaha wax soo saarka farsamada, qalabka wax lagu farsameeyo ee CNC waa lama huraan, oo badanaa loogu yeero xarunta mashiinka, oo sidoo kale loo yaqaan gong computer. Hadday xarun wax-qabad ay dabooli karto shuruudaha saxda ah ee alaabada wax soo saar, tan hore ayaa ah in saxnaanta xarunta mishiinka lafteeda ay tahay h ...
Dulmarka guud ee saxnaanta mashiinada CNC ee ku shaqaynta
Qalabka maalinlaha ah, saxnaanta mashiinka CNC waxaan caadi ahaan tixraacnaa waxaa ka mid ah laba dhinac. Muuqaalka koowaad waa saxnaanta cabirka ee habka wax loo shaqeynayo, wajiga labaadna waa saxnaanta dusha sare ee howsha, taas oo waliba ah dusha sare ee aan inta badan dhahno. Aynu si kooban u sharaxno ...
Marka la shaqeynayo, aaway faa iidada tiknoolajiyada shaabadda birta
Mashiinka guud ahaan wuxuu u qaybsan yahay mashiinada saxda ah ee loo yaqaan 'CNC machining machining', CNC lathe processing, shaabadaynta sameynta, iyo wixii la mid ah. Waa maxay farqiga u dhexeeya habka shaabadeynta birteenna caadiga ah iyo farsamaynta farsamooyinka kale, maxayse yihiin faa'iidooyinkiisu? Farqiga u dhexeeya habka shaabad bir iyo CNC proc ...